DAAWO: Musharax Abdirahman Abdishakuur oo farriin muqaal ah ku cadeeyey waxa ugu horeeya ee uu qabanayo – Kismaayo24 News Agency
by admin 22nd August 2016 22nd August 2016 097
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah musharixiinta ugu cadcad ee u taagan xilka madaxweyne ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu bilaabay farriin toos ah oo uu kula hadlo shacabka Soomaaliyeed, taasi oo uu kusoo qaato qodobada aasaasiga u ah ololaha doorashadiisa iyo wax ka dhihida wixii markaasi dalka ka jira.
Mushrax Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, horeyna dowladii uu hoggaaminayey Shiikh Shariif uga soo qabtay xil wasiirnimo ayaa waxaa uu la yimid olole si weyn uga duwan musharixiinta kale, maadaama uu bilaabay muuqaalo tayo sare leh oo xafiiskiisa warbaahinta uu soo diyaariyo.
Mar uu ka hadlayey waxa lagu dagaalay ee dhibka dowlad la’aanta keentay ayuu ku sheegay Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur inay tahay arrimo badan oo is barkan:
” Waxaa dagaalka keenay waa markii la isku qabsaday xukunka, siyaasada iyo kheyraadka dalka, sidaasi darteedna waxaa lagama maarmaan ah in shacabka Soomaaliyeed ka hishiiyaan sida uu noqon lahaa xukunka dalka, sidaasi oo kale waa in laga hishiiyaa kheyraadka dalka ee uu alle ku maneystay. ” ayuu yiri Musharax Madaxweyne , Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Dhinaca kale isaga oo kasii hadlaya dhibaatooyin kale ee jira iyo sababta keenay ayuu yiri :
“Waxaan aaminsanahay in mushkiladaha amniga, Al-Shabaab, dhaqaale xumada iyo shaqo la’aanta, waxaasi oo dhan waxaa sabab u ah waa in dadkeena aysan aragti mid ah ka laheyn siyaasadda dalka iyo qaabka ay noqoneyso dowlada aan dhisaneyno, sidaasi oo kale in aanan fahamsaneyn cadowga ay dowladaasi leedahay iyo saaxiibka ay dowladaasi leedahay” ayuu yiri Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
MAXAA MUDNAAN U LEH MUSHARAX CABDIRAXMAAN ?
“Waxaa aad mudnaan iigu leh dib u hishiisiin siyaasadeed iyo isla meel dhigista qeybsiga kheyraadka dalka, iyaddoo la xoojinayo sinaanta dadkeena Soomaaliyeed. Marka aan taasi xalino waxaan qabaa in aan xalin karno dhibaatooyinka kale ee la xiriira ammaanka, faqriga iyo Al-Shabaab.” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur, waxaana uu intaasi ku daray :
“Waxaa xalka aan rabno ku gaari karnaa dood hufan iyo wadahadal la xiriira dib u hishiisiin siyaasadeed. Waxaanu nahay dal ka baxaya awood dowlad dhexe, una gudbaya dowlad awoodeeda furfuran tahay oo federaal ah, sidaasi darteed waa muhiim in isbadelkaasi dhacaya siyaasad hishiis ku dhisan laga gaaro”
Waa farriintii labaad ee uu musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur kula hadlayo shacabka, isagoona noqonaya musharixii ugu horeeyey ee bilaabay inuu usoo diro shacabka muuqaalo todobaadle ah oo la xiriira ololihiisa. Waana qaab la mid ah sida ay sameeyeen musharixiinta dunida kale, gaar ahaan kuwa horumaray.
Warbaahinta Kismaayo24.com, waxaa ay idiin ballanqaadeysaa inay si joogta ah idin kusoo gudbiso farriimaha musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ee ha moogaan:
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA TODOBAADKAN EE MUSHARAX MADAXWEYNE CABDIRAXMAAN CABDISHAKUUR:
Galmudug oo ka hadashay Qaraxyadi ruxay Bartamaha Galkacyo
John Kerry oo Kenya garay lana kulmaya…
Maxkamadeynta wariye yaasha Shabelle iyo Sky oo markale fashil ku dhamaatay
admin 15th February 2015 28th August 2015
Maamulka Ahlusunna oo Cambareyeey Qarixi Maanta Garowe Kadhacay+ Warsaxafadeed